Hidha Laga Abbayaa Laalchisee Ibsa Bahe
Guraandhalaa 01, 2020
Hidha Laga Abbayaa
Dhimaa Hidha Laga Abbayaa irratti mari’achaa an turan, Itoophiyaa, Masrii, Sudaan, Yunaaytid Isteets fi Baankiin Addunyaa gamtaadhan ibsa baasan.
Ibsi harra, Jimaata Amajii 31 marsariitii Ministera Maallaqaa Yunaaytid Isteets irratti bahe angaawonni Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan barreessaan dhaabatichaa fi pirezdaantiin Baankii Addunyaa bakka argamanitti marii guyyaa sadi’ii (Amajjii 28 -31,2020) booda waliigaltee irra gahuu beeksise.
Dhimmoota irratti mari'atamee waliigalame oggaa tarreesus; 1ffaa, Karoora guutinsa hidha laga abayaa, Lammata, guutinsa hidhichaa yeroo ongee, fi bonaa irratti akkataa rakkina malee itti hojjatamuu fi Sadaffaa irratti, guutinsa hidha laga aabbayyaa oggaa oggaaadhan geegeeffamu akkasumas yeroo ongee hammaataa fi bonaa laalchisee waliigaltee akkaataa itti adeemmamuu qabuu ta'uu ibsa.
Kana malees biyyoonni sadeen akkaataa eegumsa hidha ijaarramaa jiruu, odeeffannoo waliif qooduu irratti, akkasumas hidhi laga abbayaa dhiibbaa haala qilleensaa fi hawaasummaa irratti qabu laalchiisee qorannoo geggeefamaa jiru irratti marii geggeessuu ibsichi eerera.
Minsitiroonni biyyoota sadeenii waliigatleen dhumaa akka qophaahuu garee isaanii ka teeknikaa fi seeraf qajeelfama keennuu fi sirni waliigaltee mallatteessuu Guraandhala, 2020 akka raawwatamu waliif galuu ibsi harra galgala marsaariitii Ministira Maallaqa Yunaaytid Isteets irratti gadhiifame ifa godheera.